Model သစ် Realme V5 ရဲ့ပုံတွေထွက်ပေါ်လာ... Realme V5 Pro လည်းထွက်လာနိုင်ချေရှိနေလား? — Anycall Mobile
Model သစ် Realme V5 ရဲ့ပုံတွေထွက်ပေါ်လာ… Realme V5 Pro လည်းထွက်လာနိုင်ချေရှိနေလား?
By john July 28, 20202Mins Read
Realme ကတော့ လာမယ့် August လ ၃ ရက်နေ့မှာ Model သစ် Realme V5 ကို Launch လုပ်တော့မှာပါ။ OPPO A72 5G ကို Launch လုပ်ပြီးချိန်ကစပြီး OPPO က Dimensity 720 5G SoC ကိုပထမဆုံးအသုံးပြဒတဲ့ Brand ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။‌ ခု Realme V5 ကပါ Dimensity 720 5G SoC သုံးလာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ SoC ကိုသုံးတဲ့ဒုတိယ Smartphone ဖြစ်လာမှာပါ။ Launch မလုပ်ခင်မှာကတည်းကRealme V5 ဟာ Retailer Site တွေဖြစ်တဲ့ Tmall နဲ့ JD.com မှာ စာရင်း ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ Tmall မှာ List လုပ်ထားပုံကတော့ အရောင်တွေနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ Variant တွေကိုပါဖော်ပြပေးထားတာပါ။
Tmall ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Realme V5 ဟာ Silver Winged Boy, Breaking Light, and Blue ဆိုပြီးအရောင်သုံးရောင်နဲ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီး6GB RAM + 128 GB storage နဲ့ 8 GB RAM + 128 GB storage Version တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ တရားဝင် ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး Realme RMX2111 model ဟာ Realme V5 နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့လည်း အတည်ပြုဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။
Realme V5 မှာ Full HD+ 6.5-inch IPS LCD panel ကိုအသုံးပြုထားပြီး Punch Hole Design ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Front Camera ကို 16MP သုံးပေးထားပြီးတော့ ကျောဖက် Camera မှာတော့ 48MP+8MP+2MP+2MP ဆိုပြီး Quad Camera Setup ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Dimensity 720 နဲ့ Run ထားတဲ့ ဒီ စမတ်ဖုန်းမှာတော့ 5000mAh Battery ကို Support လုပ်ထားပြီး 30W Fast Charging ပါဝင်ကာ Android 10 OS ကို အခြေခံထားတာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဆက်စပ်သတင်းတွေအရဆိုရင်, တရုတ် Mobile Phone ဈေးကွက်ခန့်မှန်သူတွေက Realme V5 ရဲ့အမြင့်ပိုင်း High End Version မှာ 4,500 mAh Battery ပါဝင်ပြီး 65W fast charging ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့အခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။ Model Name ကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပေမယ့် Realme RMX2121 Model ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ TENNA နဲ့ 3C ရဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုရင်တော့ Realme V5 Series ကို Realme V5 Pro နဲ့အဆုံးသတ်မယ်လို့ပြောထားတာကြောင့် အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Realme RMX2121 ဟာ Realme V5 Pro များဖြစ်နေမလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။
New ModelRealmeV5 Series